VaMangoma Vanomiswa Mudare Vachipomerwa Mhosva Yekutyora Mitemo
Kurume 11, 2011
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto, Va Elton Mangoma, vamiswa pamberi pedare neChishanu vachipomerwa mhosva yekushandisa chigaro chavo zvisiri pamutemo zvanzi nehurumende zvakaita kuti vatyore mutemo we Criminal Law (Codification and Reforms) Act. VaMangoma vakasungwa muHarare neChina.
Vachisvitsa nyaya yaVa Mangoma kudare, muchuchisi wehurumende panyaya iyi, Va Chris Mutangadura, vati Va Mangoma vakashandisa chinzvimbo chavo kutyora mutemo uyu.
Va Mutangadura vabva vapa Va Mangoma mudare makare mapepa ekuvapomera mhosva kana kuti indictment papers pamberi pemutongi kuti vagomiswa mudare repamusoro re High Court vakatarisana nemhosva iyi.
Va Mutangadura vati nyaya yaVaMangoma ichatanga kutongwa musi wa 28 Kurume mudare repamusoro.
Mutongi wedare, Va Mishrod Guvamombe, vati dare ravo harikwanise pamutemo kuti rinzwe nyaya ine huremu hwakadai, vachibva vazivisa VaMangoma kuti vanogona kusvitsa chikumbiro chekuti vabvisiswe mari yechibatiso kudare repamusoro.
Izvi zvava kureva kuti Va Mangoma vachange vari mutirongo kusvikira chikumbiro ichi chanzwikwa nedare repamusoro.
Gweta raVaMangoma, Va Selby Hwacha, vaudza dare kuti mhosva iri kupomerwa VaMangoma haina musoro.
Rimwe remagweta aVa Mangoma, Amai Beatrice Mtetwa, vati vanga vari mubishi kugadzira mapepa ekuti vasvitse chikumbiro kudare repamusoro chekuti VaMangoma vatongwe vachibva kumba.
Mapepa asvitswa pamberi pedare anoti VaMangoma vakakonzeresa kuti vakafanobata chigaro cha Chief Executive we Petrotrade, Va Geifshaw Revanewako, vatenge marita mamiryoni mashanu edhiziri kubva kukambani yeku South Africa inonzi Nooa Petroleum vasina kutevedza zvinodiwa. Mapepa aya anoti izvi zvakaburitsa pachena kuti Va Mangoma vaiva vaita zvechizivano nekambani ye Nooa Petroleum.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mumiriri weNyanga North muparamende, VaDouglas Mwonzora, nevamwe vavo makumi maviri nevatatu, vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro.
Mutongi wedare, Amai Susan Mavangira, vati VaMwonzora nevamwe vavo vabhadhare madhora makumi mashanu pamunhu wega wega uye kuti vazvipire kumapurisa kamwe chete pasvondo.
Asi nyaya yevaimbova mumiriri weHighfield muparamende, Va Munyaradzi Gwisai, nevamwe vavo vashanu vanosanganisira vaimbova mutungamiri wesangano revadzidzi reZinasu, Va Hopewell Gumbo, haina kunzwikwa mudare sezvanga zvakatarisirwa.
Magweta ehurumende audza dare kuti haana kugadzirira zvakakwana pachikumbiro chakasvitswa nevasungwa ava kuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuronga zvekupidigura hurumende.
Zvichakadai, European Union pamwe neAmerica dzashora kusungwa kwaVaMangoma nekugariswa mutirongo kwenguva ndefu kwakaitwa VaMwonzora.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare neChishanu, vakafanobata chigaro chemumiriri we EU muZimbabwe, Amai Barbara Plinkert, vakurudzira hurumende kuti itevedzere zviri muchibvumirano chezvematongerwo enyika che Global Political Agreement vachiti EU haisi kufara nenyaya yemhirizhonga nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu munyika.
Vakurudzirawo kuti gweta guru rehurumende, Va Johannes Tomana, pamwe nevatongi vedzimhosva kuti vasarerekere kurutivi rumwe chete panyaya dzezvematongerwo enyika.
Amai Plinkert vati kusungwa kwaVaMangoma kunokanganisa nhaurirano dziripo pakati pe EU nehurumende yeZimbabwe sezvo vari mumwe wevanhu vari kumirira Zimbabwe panhaurirano idzi.
Nyika dzemu EU pamwe neAmerica dzakatemera VaMugabe nevamwe vavo vari muZanu PF zvirango zvehupfumi dzichiti vaityora kodzero dzevanhu munyika.